हजारौंको ज्यान बचाएका डा. उपेन्द्र देवकोटा आफैं बिरामी, लन्डनमा भर्ना | Sabaiko Online
Home Flash News हजारौंको ज्यान बचाएका डा. उपेन्द्र देवकोटा आफैं बिरामी, लन्डनमा भर्ना
हजारौंको ज्यान बचाएका डा. उपेन्द्र देवकोटा आफैं बिरामी, लन्डनमा भर्ना
लन्डन । नेपालका एकजना वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटा सिकिस्त बिरामी परेपछि लन्डनमा उपचारार्थ भर्ना भएका छन् । देवकोटाको किंग्स कलेज हस्पिटल, डेनमार्क हिल, ब्रिक्टनमा उपचार भइरहेको लन्डनस्थित दूतावास श्रोतले जानकारी दिएको छ । देवकोटा सिकिस्त विरामी भएर उपचार गराइरहेको भन्ने खबर केही अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा केही दिन यता भाइरल भइरहेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा देवकोटालाई क्यान्सर भएको भनि विभिन्न पोष्ट र समाचार आएपनि दूतावासले भने त्यसबारे जानकारी नभएको बताएको छ ।
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत भएका डा. देवकोटा बीर अस्पतालको पहिलो न्यूरोलोजिकल ट्रमा युनिटका संस्थापक हुन् । पछिल्लो समय उनी न्यूरो हस्पिटल, बांसबारीका सञ्चालक छन् ।
देवकोटाले बेलायतकै अटकिन्सन मोर्ले हस्पिटल, ग्लास्गो (हाल सेन्ट जर्ज हस्पिटलको एक अंश) मा न्यूरोसर्जरीबारे विशेष प्रशिक्षण लिएका थिए ।
राजनीतिमा समेत विशेष चासो राख्ने गोरखा स्थायी घर भएका देवकोटाले बेला मौकामा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिइ आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै आएका छन् । पुराना कम्युनिष्ट नेता बाचस्पति देवकोटाका सहोदर भाई भएकाले पनि डा. उपेन्द्रलाई राजनीतिक चासो रहेको ठम्याउन सकिन्छ । उनको सहपाठी पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबीच चर्को प्रतिष्पर्धा रहंदै आएको छ । हालै सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि देवकोटा बाम गठबन्धनको चुनावी प्रचार प्रसार, गोरखामा बाबुराम विरुद्ध सक्रिय भएर लागेका थिए ।
सन् १९८९ मा बेलायतमा अध्ययनपछि नेपाल फर्किएर हजारौंको ज्यान बचाएका देवकोटा अहिले आफैं बिरामी भएपछि उनीप्रति सामाजिक सञ्जालमा सद्भाव र सहानुभूति बढेको छ ।
गोरखाको ग्रामीण परिवेशमा हुर्किएर भारत र बेलायतमा अध्ययनपछि उनी स्वदेशमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्ने अठोटले फर्किएका उनका आफन्त बताउंछन् ।
ओली र प्रचण्ड माधव समूह दुवैको कानूनी आधिकारीकता विवाद अझै पेचिलो बन्दै
जलजलाको नाङ्लीवाङमा सयौ नेकपा कार्यकर्ता काँग्रेसमा प्रवेश
ओली र प्रचण्ड माधव समूह दुवैको कानूनी आधिकारीकता विवाद अझै पेचिलो...